युरेनियम के हो ? कहाँ–कहाँ हुन्छ यसको प्रयोग हे’र्नुहोस्
[ June 22, 2022 ] बुढीगंगामा फुटबल तथा कराँते प्रतियोगिता सम्पन्न समाचार
Homeसमाचारयुरेनियम के हो ? कहाँ–कहाँ हुन्छ यसको प्रयोग हे’र्नुहोस्
March 13, 2021 admin समाचार 6260
नेपालमा पहिलोपटक युरेनियम ब’रामद गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–६ बौद्धबाट महानगरीय प्रहरी कार्यालयको टो’लीले बिहीबार साढे २ किलो युरेनियम बराम’द गरेको हो । आखिर के हो त युरेनियम ? धर्तीभित्र एउटा यस्तो चीज पाइन्छ, जो देख्नमा अत्यन्त’ सुन्दर, सफा र चमकदार छ र हावाको सम्पर्कमा आउ’नासाथ स्वयम् जल्छ । यसको नाम हो युरेनियम ।
रासायनिक रुपमा यस’लाई अंग्रेजी ‘यू’ बाट दर्शाइन्छ र यसको परमाणुक्रमांक ९२ हुन्छ । यसलाई मेटल अफ होप नामले पनि चि’निन्छ । विश्वमा यो सबैभन्दा धेरै अस्टे«लियामा पाइन्छ । पृथ्वीको माथिल्लो सतहमा युरेनियमको १०४० टन मात्रा छ, युरेनियम चम’कदार सेतो रंगको धातु हो ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार यो निकै ज्या’दा सक्रिय तत्व हो । जसको अर्थ, यसले कुनै पनि पदार्थसँग चाडै नै क्रिया उ’त्पन्न गर्छ । र, यदि हामील युरेनियमलाई खुला हावा छाड्यौं भने यो पदार्थ जल्न थाल्छ ।
यो त यसको स्वभा’व भयो, तर के तपाईंलाई थाहा छ यसको प्रयोग कहाँ–कहाँ हुन्छ ?
यो अत्यन्त उप’योगी र मुल्यवान् धातु हो । परमाणु उर्जामा यसको उपयोग बिजुली उत्पा’दनका लागि गरिन्छ । पृथ्वीमा आजको समय युरेनियाको सबैभन्दा अधिक उपयोग प’रमाणु उर्जाका रुपमा गरिन्छ भन्दा सही हुन्छ । तर युरेनियमको प्रयोगले संसारमा धेरै वि:वाद पनि सिर्जना गरेको छ । किनकी, धेरै देशले युरेनियमलाई परमा’णुशक्तिको रुपमा प्रयोग गर्छन् ।
सायद, तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ, युरेनियमलाई परमा’णुबमको निर्माणमा पनि प्रयोग गरिन्छ । विश्वका धेरै देशमा परमाणु बमको निर्माण प्रतिब’न्धित छ । तर केही देशले शक्तिशाली बन्ने होडमा , त केहीले आफुलाई सुरक्षित राख्नका लागि यसको प्रयो’ग गर्ने गरेका छन् ।
यदि युरेनियमको उत्ख’नन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सकियो भने नेपालीहरूको प्रति’व्यक्ति आय संसारकै सबैभन्दा धेरै हुन सक्ने विज्ञ हरू बताउँछन् । केही अघि खानी तथा भूगर्भ वि’भागको अनुसन्धानका अनुसार नेपालका धेरै ठाउँहरुमा युरेनि’यम पाइने सम्भावना देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १ केजी शुद्ध युरेनि’यमको करोडौं पर्ने बताइन्छ । – रातोपाटीबाट
अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको ‘महामृत्युञ्जय मन्त्र’ सार्वजनिक
नेपालकै खतरनाक महिला रेस्लर भगवतीले अन्तरबार्तामै पत्रकारलाइ उचालेपछि (भिडियो हे’र्नुहोस)
६५ वर्षीय बा आमाले गरे अ’चम्मको विवाह,जिस्किदा जिस्किदै लभ परेपछि यस्तो भयो (भिडियो हे’र्नुहोस)
December 11, 2021 admin समाचार 5281
मानिसको बिहे गर्ने औस’त उमेर भनेकै २२ बर्ष पछि २७ बर्ष सम्म हो,यो उमेरलाई परिपक्क उमेर मान्ने गर्दछन नेपाली समाजमा तर आज एउटा यस्तो अचम्म’को बिहे भयो जुन बिहेमा केहि जन्ती मात्रै देखिन्थे ।बेहुलाको उमेर
मायाको अगाडी केहि लाग्दैन, यी हजुर बुबा र नातिनी जस्तो देखिने जोडी एका एक भाइरल बने (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 4, 2021 admin समाचार 5827
सामाजिक सञ्जालमा आजभोली अनौठो लाग्ने घ’टना सार्वजनिक हुन्छन् । अस्वभाविक लाग्ने वैवाहिक जोडीको अ’नौठो कहा’नीलाई मनोरञ्जनका रुपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्छन् । तर उनीहरुको भित्रि पी डा भने देखाइदैन । सामाजिक सञ्जालमा भ्युज पाउन अस्व’भाविक देखिने
८ जनाले ज्या`न गुमाएको जिप दुर्घ`टनामा परेकी बेहुलीको दाहिने हात का`टियो
February 6, 2022 admin समाचार 2098
प्युठानमा शनिबार बिहानै भएको जिप दुर्घ`टनामा परेर घा`इते बेहुलीको हात का`टिएको छ।दुर्घटनाका घाइते बेहुली रिमा जिसीको भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स एन्ड टिचिङ अस्पता`लमा उप`चार भइरहेको छ। जिप दुर्घ`टनामा गम्भी`र घा`इते जिसीको दाहिने हात
बुढीगंगामा फुटबल तथा कराँते प्रतियोगिता सम्पन्न
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (243693)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (231251)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (230981)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (229289)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (229214)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (228229)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228103)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (227615)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (197257)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (195576)